Sagaal Dalxiise oo lagu Dilay Pakistan
Niman hubeysan ayaa woqooyiga dalka Pakistan waxa ay ku dileen 9 qof oo dalxiisayaal ajnabi ah iyo qof u dhashay Pakistan oo dhulka kala tusayey, iyagoo ku sugnaa goob lagu nasto oo ku taalla mid ka mid ah buuraha ugu dheer caalamka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee dalka Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan, ayaa sheegay in dalxiisayaashan oo la dilay goor hore oo Axaddan maanta ah ay isugu jireen lix u dhalatay wadanka Ukrain iyo seddex Chinese ah. Saraakiisha ayaa goor sii horeysay waxa ay sheegeen in dadka dhintay uu ku jiray qof ka soo jeeda wadanka Ruushka.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in dalxiise u dhashay wadanka Shiinaha uu ka baxsaday weerarka ayna soo badbaadiyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee milateriga. Khan ayaa sheegay in qof labaad oo u dhashay Pakistan oo hagayey dalxiisayaasha uu isna sidoo kale badbaaday.
Mas’uuiyiiinta ayaa sheegay in nimanka hubeysan ay weeraraan kooxda dalxiisayaasha oo ahaa kuwa buuraha fanta, mar ay ku suganaayeen saldhiga Nanga ee buurta Parbat, sida caadiga ahna deegaanka ay ku yaalaan buuraha Himalaya waa mid nabdoon.
Taliban-ka Pakistaan ayaa sheegtay mas’uuliiyadda weerarka. Kooxda ayaa sheegtay in dadkan ay dileen ay ugu aareen weerarkii ay diyaaradaha aan cidina wadin ee Mareykanku ay ku dileen hogaamiye ku-xigeenkii Taliban oo la dilay bishii May ee sanadkan.
Mas’uuliyiinta wadanka Pakisrtan ayaa goobta weerarku ka dhacay soo dhoobay ciidamada nabadgalyada oo isugu jira kuwo lug ah iyo kuwo wata diyaarado helicopter ah si ay u soo qaadaan meydadka, ayna u baadi doonaan kooxdii weerarka geysatay. Ciidamada ayaa xiray dhamaanba albaabada laga soo galo ama laga baxo ee degaanka ay buuruhu ku yaallaan, sidoo kalena waxa ay su’aalo waydiinayaan qofka labaad ee u dhashay Pakistan oo hagayey kooxda dalxiisayaasha ah oo ka badbaaday weerarka.
Weerarkan ayaa laga yaabaa inuu sii dhaawaco suuqa dalxiiska dalka Pakistan oo horey ay u wiiqeen weerarada argagixisadu.